PROFILE | Myanmar Kaung Hman
History of Myanmar Kaung Hman
အမှန်တကယ်အားဖြင့် မြန်မာ့ကောင်းမှန်လုပ်ငန်းစု ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ အစမူလ ပထမမှာ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည့် ကလို့(စ်)ဖရင့် ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဖြစ်သည်။
Infact, the origin of Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd. is Close Friend Co., Ltd. which isaservices company.
ကလို့(စ်)ဖရင့်ကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် အစပိုင်းတွင် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၌ ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းများ၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေး စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းများ စသည်ဖြင့် အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
Close Friend Co., Ltd. was established in the beginning of year 2013 asaprofessional services agency especially for the Pesticide Registration, Company Resitration, Pesticide Field Trials conducting and Real Estate Services.
၂၀၁၅ ခုနှစ် အလယ်ပိုင်းတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဗီယက်ကျူး ကုမ္ပဏီမှ ၎င်းတို့၏ ပိုးသတ်ဆေးများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တင်သွင်းဖြန့်ချီရေးအတွက် လုပ်ငန်းအကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းလာသဖြင့်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဗီယက်ကျူးကုမ္ပဏီမှ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပိုးသတ်ဆေးများအား မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေးဈေးကွက်အတွင်းသို့ တင်သွင်းဖြန့်ချီရန်အတွက် မြန်မာ့ကောင်းမှန်လုပ်ငန်းစု ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd. was founded in the middle of year 2015 for importation of Vietnamese Pesticides from Viet Trung Pesticide Joint Stock Company who registered their Pesticides in Myanmar, according to their offer for the business cooperation that their Pesticides is to distribute in the territory (in Myanmar agricultural market).
၂၀၁၆ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကွမ်နောင်းကုမ္ပဏီမှ ၇ွက်ဖြန်းမြေသြဇာ (၁၁)မျိုးကို မြန်မာနိုင်ငံ ဈေးကွက်သို့ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားရန် စီမံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
The foliar Fertilizers manufactured by Quang Nong Group Company, Vietnam were planned to be marketed into Myanmar market, in year 2016.
စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစု ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် တောင်သူလယ်သမားကြီးများအား အရည်အသွေးမြင့်၍ ဈေးနှုန်းမှန်ကန်မှုရှိသော စိုက်ပျိုးရေးဆေးများကို ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးအတွက်ဟူ သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂၀၁၆ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ ဟုန်လီယွန်မြေသြဇာကုမ္ပဏီမှ ကြာနီအမှတ်တံဆိပ်ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာများကို မြန်မာတောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက်၊ ဖြန့်ဖြူးနိုင် ရေး အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
As an Agricultural Import distribution company, the compound fertilizers withabrand name of Red Lotus produced by Vietnam Hong Lien Fertilizer company was registered in the end of 2016, in Myanmar to serve qualified agricultural inputs as well as compound fertilizers withareasonal price to Myanmar farmers by the best effort.
မြန်မာတောင်သူလယ်သမားကြီးများကို ပိုမိုပြည့်စုံစေရန်စေတနာဖြင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာ စိုက်ပျိုး ရေးဆေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် ဆင်နာမြန်းကုမ္ပဏီဖြင့်လည်း ၎င်းတို့၏အရည်အသွေးမြင့် စိုက်ပျိုး ရေးဆေးများကို တင်သွင်းဖြန့်ချီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
In order for the farmers to gain more high quality agricultural inputs, the agrochemical products fromamultinational Agrochemical company, named by Sinamyans Group Company in Singapore would be inported and distributed into Myanmar market, as an objective of goodwill for Myanmar Farmers.
မြန်မာ့ကောင်းမှန်ကုမ္ပဏီလီမိတက် အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီသက်တမ်းအားဖြင့် ငယ်ပင်ငယ်သေးငြားသော် လည်း၊ မြန်မာတောင်သူလယ်သမားကြီးများအတွက် အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးမှုများ ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ အရည်အသွေးမြင့် ပိုးသတ်ဆေးများ၊ မှိုသတ်ဆေးများ၊ ပေါင်းသတ်ဆေးများ၊ ရွက်ဖြန်းမြေသြဇာများ၊ ကွန်ပေါင်းမြေသြဇာများနှင့် မြေပြုပြင်အာဟာရမြေသြဇာများကိုအရှိန်အဟုန်ဖြင့် တင်သွင်းဖြန့်ချီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။
Please be informed that Myanmar kaung Hman Company would be serving utmost to Myanmar Farmers withamomentum for high quality Insecticides, Fungicides, Herbicides, Foliar Fertilizers, Compound Fertilizers and Soil Conservative Fertilizers, even though Myanmar Kaung Hman is stillayoung agrochemical company.
မြန်မာကောင်းမှန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ မြန်မာတောင်သူများအတွက် ထားရှိအပ်သော စေတနာဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော ဆောင်ပုဒ်မှာ “ကောင်းမွန်သော အရည်အသွေး၊ မှန်ကန်သော မူဝါဒတို့ဖြင့် မြန်မာ့ကောင်းမှန်” ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
As an effort and goodwill upon Myanmar farmers, Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd. is trying it’s the best to serve Myanmar Farmers withaslogan of “Good Quality, Right Policy”.
829/A, Thu Mingalar Rd, Ward(7),
MYANMAR KAUNG HMAN GROUP CO.,LTD
Tel : (+95 1) 565588, (+95 9) 43135303,
(+95 9) 782228380, (+95 9) 782228381
© 2016-2020 Myanmar Kaung Hman Group Co., Ltd. Web Design by NetScriper